Maraykanka Oo Xeerar Culus Ka Soo Saaray Visa-ha La Siiyo Haweenka Uurka Leh – Heemaal News Network
Maamulka Trump ayaa khamiistan soo saaray xeerar fiiso oo cusub oo loogu talagalay in lagu xakameeyo wax loogu yeedhay “dalxiiska dhalashada,” oo ay haweenku ugu safraan Mareykanka iyaga oo dalxiisayaal iska dhigaya si ay ugu dhalaan dalkaasi, si carruurtoodu ay u helaan baasaaboor Mareykan ah.
Dadka soo dalbada Visaha ayaa loo diidi doonaa fiisooyinka dalxiiska ah ee ay raadinayaan haddii ay go’aamiyaan saraakiisha socdaalku inay haweenkaasi xaamilo yihiin ayna dhawday fooshoodu.
Xeerkan ayaa kala saaraya haweenka dalxiiska dhalmada ah u socda iyo kuwa kale ee foosha ah ee caafimaadka u doonanaya Marykankana si ay halkaas ugu dhalaan, waxana uu xeerku sheegayaa in kuwa leh baahi caafimaad loola dhaqmi doono sida ajaanibta kale ee u yimaada Mareykanka si loo daweeyo waana inay cadeeyaan inay hayaan lacagta ay ku bixinayaan caafimaadkooda oo ay ku jiraan kharashyada gaadiidka iyo nolosha.
Wasaaradda Arimaha Dibadda “ma aaminsa booqashada Mareykanka lagu imanayo ee ujeedeeda ugu weyn ay tahay in dhalashada Mareykanka loo helo cunugga dhalanaya , waxana ay dhalashada noocan ah ugu magac dartay ‘dalxiiska dhalashada’ – waana mid sharci daro ah oo loogu talagalay dalxiiskii dabiiciga ahaa in lagu waxyeeleeyo”ayaa ka mid ah waxyaabaha ku xusan xeerarka cusub, oo dhaqan galaya Jimcaha.
Sharcigan ayaa gacan ka geysan doona ciribtirka falal dambiyeedka la xiriira suuqa dalxiiska dhalashada, macluumaadkii u dambeeyay ee la ururiyay ayaa waxay sharraxayaan qorshayaasha dalxiiska dhalashada taas oo muwaadiniinta ajnabiga ah ay dalbadeen fiisooyin ay ku imanayaan Mareykanka isla markaana ay been uga sheegaan saraakiisha socdaalka muddada safarkooda, halka ay joogi doonaan, iyo ujeedada safarkooda.” ayaa lagu xusay shargigan.
Shiinaha ayaa ah dalka ugu badan ee haweenkiisu ku dhalaan Maraykanka iyaga oo dalxiisayaal ah, waxana xusid mudan in ka hor maamulka Trump maraykanku uu si wayn ula hirdamayay inuu xeerar ka so saaro suuqan dhalashada dalxiiska ee sharcidarada ah.